ဘင်္ဂါလားဒေ့ရှ် အိုင်ဒေါမှာဆုရခဲ့ပြီးအောင်မြင်နေခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အဆိုတော် Mong Uching !!! – ရှအေလငျး
မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက် က ဘင်္ဂလားဒေရှ် နိုင်ငံမှာအဆိုတော် တစ်ယောက်အဖြစ်အောင်မြင်နေတယ် ဆိုတာကို သိရရင်ယုံတောင်ယုံနိုင်ကြပါ့မလား နော်။
ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးတွေ အရမ်းကြီးစိုးတဲ့ ဘင်္ဂလားလူမျိုးတွေကြားမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားရခိုင်တိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဦးချင်းမာန် (Mong Uching )ကတော့ ဘင်္ဂလား အိုင်ဒေါ ရဲ့ ဆုရှင်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
မကြာသေးခင်ကမှ လူမှုကွန်ယက်တွေပေါ်မှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန် ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ Mong Uching ရဲ့ ကြိုးစားမှုတွေကတော့ သြချလောက်စရာပါ .
လက်ရှိ မြန်မာအိုင်ဒေါ ဆုရှင် ဖြိုးမြတ်အောင်လိုဘဲ Mong Uching ဟာ ကျေးလက်ရွာလေးတစ်ရွာကနေ အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိခဲ့တဲ့ ရွက်ပုန်းသီးပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ထူးခြားချက်တာ က ဘင်္ဂလားဒေရ်ှနိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီး သူ့မျိုးနွယ်စု သီချင်းရော ၊ ဘင်္ဂလီ သီချင်းတွေကို ပါ ကောင်းမွန်အောင်သီဆိုနိုင်တာကြောင့် ဒိုင်တွေကိုယ်တိုင်က အသိအမှတ်ပြုခဲ့ရပါတယ်။
ထူးခြားတဲ့ ရုပ်ရည်၊ သီဆိုမှုကောင်းမွန်ခြင်း ၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုမြင့်မားခြင်းတွေကြောင့် Mong Uching ကို ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံသားတွေက မြှောက်စားခဲ့ကြတာပါ။
Mong Uching ဟာ ဘင်္ဂလားအိုင်ဒေါဆု ပိုင်ရှင် တစ်ယောက်ထည်းသော နိုင်ငံခြားသားပြိုင်ပွဲဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် Mong Uching ရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်လို့ မှတ်ချက်ပေးဖို့ မမေ့နဲ့နော် ။
Source – Bangladeshi Idol/BABWO
Ref – mm feed
မွနျမာနိုငျငံသားတဈယောကျ က ဘင်ျဂလားဒရျှေ နိုငျငံမှာအဆိုတျော တဈယောကျအဖွဈအောငျမွငျနတေယျ ဆိုတာကို သိရရငျယုံတောငျယုံနိုငျကွပါ့မလား နျော။
ဘာသာရေး၊ လူမြိုးရေးတှေ အရမျးကွီးစိုးတဲ့ ဘင်ျဂလားလူမြိုးတှကွေားမှာ မွနျမာနိုငျငံသားရခိုငျတိုငျးရငျးသားတဈယောကျဖွဈတဲ့ ဦးခငျြးမာနျ (Mong Uching )ကတော့ ဘင်ျဂလား အိုငျဒေါ ရဲ့ ဆုရှငျအဖွဈပျေါထှကျလာခဲ့ပါတယျ။
မကွာသေးခငျကမှ လူမှုကှနျယကျတှပေျေါမှာ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ ထှကျပျေါလာခဲ့တဲ့ Mong Uching ရဲ့ ကွိုးစားမှုတှကေတော့ သွခလြောကျစရာပါ .
လကျရှိ မွနျမာအိုငျဒေါ ဆုရှငျ ဖွိုးမွတျအောငျလိုဘဲ Mong Uching ဟာ ကြေးလကျရှာလေးတဈရှာကနေ အောငျမွငျမှုတှကေိုရရှိခဲ့တဲ့ ရှကျပုနျးသီးပွိုငျပှဲဝငျတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။
ထူးခွားခကျြတာ က ဘင်ျဂလားဒရျှေနိုငျငံမှာနထေိုငျပွီး သူ့မြိုးနှယျစု သီခငျြးရော ၊ ဘင်ျဂလီ သီခငျြးတှကေို ပါ ကောငျးမှနျအောငျသီဆိုနိုငျတာကွောငျ့ ဒိုငျတှကေိုယျတိုငျက အသိအမှတျပွုခဲ့ရပါတယျ။
ထူးခွားတဲ့ ရုပျရညျ၊ သီဆိုမှုကောငျးမှနျခွငျး ၊ ကွိုးစားအားထုတျမှုမွငျ့မားခွငျးတှကွေောငျ့ Mong Uching ကို ဘင်ျဂလားဒရှျေ့နိုငျငံသားတှကေ မွှောကျစားခဲ့ကွတာပါ။
Mong Uching ဟာ ဘင်ျဂလားအိုငျဒေါဆု ပိုငျရှငျ တဈယောကျထညျးသော နိုငျငံခွားသားပွိုငျပှဲဝငျလညျးဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေို ဆကျလကျဆောငျရှကျနတေယျလို့လညျးသိရပါတယျ။
ပွိုငျပှဲတဈလြှောကျ Mong Uching ရဲ့ ဖွတျသနျးမှုတှကေို ပရိသတျတှအေတှကျ တငျဆကျပေးလိုကျတာဖွဈလို့ မှတျခကျြပေးဖို့ မမနေဲ့နျော ။
Denko ကံထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲမှာ…. ကံထူးရှင်တစ်ဦးထဲက …ဆု၃ဆုတောင် …ကံထူးသွားသူ…